जहाँ अचम्म चिजमा कर लगाइन्छ, स्तन समेत नापेर कर लिने देश - Sidha News
जहाँ अचम्म चिजमा कर लगाइन्छ, स्तन समेत नापेर कर लिने देश
एजेन्सी। नेपालमा संघीय व्यवस्थाको शुरू भएपछि सरकारले जथाभावी रूपमा कर लगाएर जनतालाइ करको भार लगाएको समाचार बनिरहन्छ । संसददेखि सडकसम्म मात्रै होइन, सामान्य चियापसलदेखि तारे होटलसम्म करको करकर चलिरहन्छ । तर संसारमा यस्ता देश पनि छन्, जहाँ अचम्म चिजमा कर लगाएको पाईन्छ ।
१. से*क्स कर
जर्मनमा वे*श्यावृतीलाई वैधानिकता दिए पनि त्यसलाई ‘से*क्स कर’ जस्ता कानुनले नियमन गरिएको छ । सन् २००४ मा ल्याइएको यो कानुनअनुसार वे*श्याहरूले प्रतिमहिना १ सय ५० युरो कर बुझाउनु पर्दथ्यो । पार्ट टाइम वे*श्यावृति गर्नेले प्रतिदिन ६ युरो बुझाउनु पर्दथ्यो । यही ‘से*क्स कर’ ले मात्रै जर्मनको आम्दानी वार्षिक १ मिलियन युरो हुने गर्दथ्यो ।
२. स्तन कर
संसारका कतिपय देशमा स्तन कर पनि लगाइएको पाइन्छ । कर असुल गर्नेले महिलाको स्तनको नापअनुसार कर असुल्ने गर्दथे । यस्ता करबाट आजित भएकी एक युवतीले आफ्नो स्तननै का*टेर फालेको बताइन्छ ।
३. मुत्र कर
रोमनका राजा वेस्पेशनले मुत्र कर लगाएका थिए । घरमा वाहेक अन्यत्र पिसाव गरेको कर तिर्नु पथ्र्याे । जब उनका छोराले बाबुलाई यस्तो फोहोरी काम किन गरेको भन्दै प्रश्न गरे, राजाले छोरोको नाकमा सिक्का टाँसि दिदैं भने, ‘पैसाबाट दुर्गन्ध आउँदैन ।’
४. वयस्क कर
बेलायतमा जूलियस सिजरले सन् १६९५ देखि १७०२ सम्म ‘वयस्क कर’ लगाएका थिए । मुसोलिनीले पनि १९२४ मा यस्तो कर लगाएको बताइन्छ । यो कर अन्तर्गत २१ देखि ५० वर्षका अविवाहित पुरुषले वयस्क कर तिर्नु पर्दथ्यो । त्यतिमात्र होइन् उनीहरूलाई वजारमा निवस्त्र घुमाएर गिल्ला गरिन्थ्यो ।